Emva-sales service Ngale futhi uyale lusekele futhi isiqinisekiso izinzuzo zakho.
◇ Thumela ochwepheshe lokufeza ukufakwa futhi ilungise inkinga kwemishini for abasebenzisi benezinto isinxephezelo. Amazwe noma izifunda isimo sezombusazwe engazinzile noma ubhekene sempi abafakiwe nohlelo lwethu lokusebenza. .
◇ Qeqesha abasebenzisi zayala imishini aziholele ukukhiqiza ephephile.
◇ Chaza ukunakekela of imishini ngokucophelela futhi asuse amaphutha ezivamile.
◇ We are necala zonke izindleko zokulungisa ukuthi kubangelwa izinkinga zethu izinga ngaphakathi yesiqinisekiso konyaka. Izesekeli Foreign ngokuvamile ezithunyelwe nge DHL e orde ukunikeza inkonzo amakhasimende angaphandle ngokushesha.
◇ Amakhasimende bezizwe ababekhulekela unemibuzo ku emva-sales service kungaba ngokuqondile ukuthumela i-imeyili ibhokisi leposi wethu okhethiweyo. Sizokwenza ukuphendula imibuzo yakho ku 12 amahora nokurarulula imiraro ahlukahlukene amakhasimende ngesikhathi.
◇ Kwamanye izifunda kabani visa kunzima ukuthola, amakhasimende Ungase futhi uthumele ochwepheshe kwabo inkampani yethu ukuthola isiqondiso futhi ukuqeqeshwa khulula.
◇ Yamukela Tiphakamiso ngcono ukubeka phambili amakhasimende ngendlela eqotho. Ngokuhambisana izinguquko emakethe, ukuhlinzeka imikhiqizo kanye namasevisi ukuhlangabezana nezidingo abasebenzisi 'futhi udale yimuli.
◇ Amakhasimende kabani imikhiqizo passsed yesiqinisekiso saso date anelungelo ukujabulela emva-yokuthengisa yethu service ukuphila.
Uma uneminye Imfuneko
Sicela uxhumane nathi ngesikhathi
Ngemva-yokuthengisa service hotline: + 86-595-22356770 noma emva-sales service E-mail kumakhasimende angaphandle: aftersales@qunfeng.com noma aftersale01@qunfeng.com
Sizokwenza enza konke okusemandleni akhe ukuze uxazulule izinkinga zakho. Ukuphumelela kwakho izokwengeza enkazimulweni entsha kithi!
Siyabonga yakho eqotho kuwe!